Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | République de Madagascar VOI ANKAMEVA – ANKAZOMBORONA : MODELY AMIN’NY FITANTANANA NY HARENA VOAJANAHARY – Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Nanatanteraka fambolena honko miisa 2 000 tamin’ny velaran-tany 2 Ha niaraka tamin’ireo mponina ao Ankazomborona Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa, ny WWF, ny Faritra DIANA ary ny tetikasa KOBABY nandritra ny firotsahana ifotony tao amin’ny Kaominina Bemaranja ao Ambilobe.
Modely amin’ny fahaiza-mitantana ny fikambanana « VOI Ankameva » izay mikobaby faritr’ala honko mirefy 1 667 Ha ao Ankazomborona.
Nanomboka ny taona 2015 hatramin’ny 2019 dia nahavita namboly ala honko mirefy 160 Ha izy ireo ary mitohy hatrany izany famerenana ny faritr’ala honko izany.
Vokatry ny fahaizan’ireo mponina miaro ny ala honko ao aminy dia i Ankazomborona no isan’ireo toerana mamokatra makamba be indrindra aty afrika.
Mifandraika amin’ny fanatanterahana ny velirano faha 10 ny fambolena ala honko izay sahanin’ireto mponina ao Ankazomborona ireto ka nankasitraka ny ezaka ataony Ramatoa Minisitra ary nankahery azy ireo fa tsy irery izy ireo fa hifanome tanana aminy hatrany ny MEDD, ny WWF sy ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny asa fiarovana izay ataony sy ny fanatsarana ny asa fihariana izay sahanin’izy ireo.